INDAWO YOKUSEBENZA - I-NJ & NY Real Estate, i-Selectate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli Bokuqothuka
Ikhaya / PRACTICE IZINDAWO
Izindawo Zokuzijwayeza eNew York
ENew York naseNew Jersey, amaklayenti ethu angalindela ukwedluliswa kwezimangalo zangaphakathi nangaphandle kwenkantolo. Isinyathelo sokuqala sokukumela ekubonakalweni ngaphambi kwesikhathi ukufaka impendulo enkantolo efanelekile futhi sifune ukuqondiswa kokuncishiswa kokulahlekelwa ngokusebenzisa izingqungquthela noma isimo sokulamula. Sivumele ukuthi sikusize uthole indlela enhle yokusindisa ikhaya lakho.
I-New Jersey Bankruptcy Isahluko 7 noma i-13
Ukuqothuka kungenzeka noma kungabi yilokho okudingayo. Xhumana nathi ukuze ubheke isimo sakho ukuze usize ekuboneni ukuthi ngabe lokho kukufanele yini.
Ungase ube sesimweni sokuthi ukuqothuka kungakusiza, kepha kunezikhathi lapho ungahluleka ukukhokhela ukuqothuka.
Xhumana nathi ukuze wenze izinketho zakho.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyifune lapho ugcina ummeli wokuvalelwa kwakho ngumuntu olalelayo futhi anikeze ukuvala kwakho ukunaka okufanele. Ihhovisi lethu linohlelo lokuphathwa kwamacala oluhle kakhulu oluqinisekisa ukuthi ngeke siphuthelwe into uma kufikwa lapho kuvalwa khona. Noma ngabe kuyikhaya lakho noma impahla yakho yokutshala imali, thembela esinyatsweni sakho esilandelayo.
Umthetho Wezamabhizinisi Amancane
Izinsizakalo ezenziwa yithimba lethu lebhizinisi nelebhizinisi elenziwa ngokwezifiso zezidingo zebhizinisi ngalinye, futhi lisuka emsebenzini webhizinisi kuya ezindabeni zamacala amakhulu. Iqembu lethu lithatha indlela ebusayo yokuxazulula izinkinga nokusiza amakhasimende ethu ukuthi ahlele kusengaphambili. Siyakwazi ukukwenza lokho ngenxa yolwazi lomuntu siqu ekusebenzelaneni namabhizinisi amancane nezinhlangano ezinkulu.